एक टुक्रा जीवनः हिमोफिलिया पीडा « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
एक टुक्रा जीवनः हिमोफिलिया पीडा
२०७४, १२ आश्विन बिहीबार ११:१५ मा प्रकाशित
बेदराज ढुंगाना हिमोफिलिया भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । अहिले हिमोफिलिया सोसाइटीको अध्यक्ष र साझा प्रकाशनमा भाषा सम्पादनको काम गर्नुहुन्छ । हिमोफिलियाका कारण उहाँको दुबै घुँडाको जोर्नी प्रत्यारोपण गर्न डाक्टरले सुझाव दिएका छन् । तर दक्ष र हिमोफिलिया विज्ञ शल्यचिकित्सक, औषधिको अभाव र आर्थिक समस्याका कारण त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा उहाँको दैनिक दिनचर्यामा कठिनाइ बढ्दै गएको छ । लमजुङ दुराडाँडाका ढुंगानाले हिमोफिलिया पीडासँग कसरी संघर्ष गरिरहनुभएको छ ? उहाँकै शब्दमा जानौं ।
जब उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न थालेँ
विद्यालय जाँदा निकै पीडा हुन्थ्यो । तर जान छाड्दैनथेँ । भित्री भागमा ब्लिडिङ भएर कुन बेला अत्यधिक जोर्नी दुख्छ भन्ने ठेगान हुँदैनथ्यो । कहिलेकाँही त महिनौं रोएर बस्थेँ । महिनामा १५ दिन पनि विद्यालय जान सक्दैनथेँ । सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन मुस्किल पथ्र्यो । जोर्नी सुन्निदा बाथ रोग हो कि भनेर विभिन्न औषधि गरिन्थ्यो । तातोले सेक्ने गरिन्थ्यो । धेरै पीडा हुन्थ्यो । पीडाले कयौं रात रोएर बिताएँ । समस्या महिनौंसम्म हुन्थ्यो । हेमोफेलियामा आन्तरिक ब्लिडिङ हुन्छ र चिसो आइस (वरफ) ले सेक्नुपर्छ भन्ने कसैलाई थाहा थिएन । पीडैपीडामा २०४५ सालमा एसएली पास गरेर चितवनतिर झरेँ । चितवनामा ठूली आमाको घर नजिकै कोठा लिएर उच्च शिक्षा अध्ययन शुरु गर्न थालेँ । पीडा हुँदा ठूलीआमाकहाँ रुँदै पुग्थेँ । नेपाली भाषामा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको छु ।
हेमोफिलियाका कारण ३ जना दाजुको ज्यान गयो । यो रोग आमाबाट पुरुष सन्तानहरुमा सर्छ । छोरीहरुलाई हुँदैन । तर छोराहरुमा समस्या देखिन्छ । मेरो मावलीको हजुरआमाको माइतीमा यो समस्या रहेछ । हजुरआमाबाट जन्मिएकी मेरी आमालाई समस्या भएन । तर मेरो आमाबाट जन्मिएका पाँच जना छोरा हेमोफिलिया पीडित भए । ३ जनाको त ज्यान गयो । तर हाम्रो ६ जना दिदी बहिनीमा समस्या छैन । हिमोफिलिया “फिमेल क्यारियर, मेल सफरर” अर्थात् महिलाले ल्याउने र जन्मिएका पुरुषमा देखिने वंशाणुगत समस्या हुने रहेछ । १८ औं शताव्दीमा बेलायतकी महारानी भिक्टोरियाका छोराहरुमा पहिलोपटक हेमोफेलियाको समस्या देखियो । भिक्टोरियाकी एक जना छोरीबाट जन्मिएका निकोलस नाम गरेका छोरामा पनि हीमोफलिया देखिएको थियो । रोयल परिवारमा देखिएकाले यसलाई रोयल डिजिज पनि भनिन्छ । यसमा महँगो औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ । हिमोफिलियाको औषधि जीवन रहेसम्म लिनुपर्छ ।
पीडै पीडाको जिन्दगी
ज¥याकजुरुक्क उठेर हिँड्न सकिँदैन । रोगसँग संघर्ष गरिरहनुपर्छ । कुन बेला समस्या हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । हरेकपटक सचेत हुनुपर्छ । शारीरिक समस्या चरम भएपछि कामलाई निरन्तता दिन कठनाइ हुन्छ । बिस्तारै कम हुन थालेपछि शारीरिक र मानसिक फूर्ति बढ्छ । परिवारले गरेको माया र सहयोगका कारण केही गर्ने आँट पलाउँछ । के गर्नु हजुर ! बारम्बार भइरहने ब्लिडिङका कारण जोर्नीहरु क्षति हुँदै जान्छन् । वि.सं.२०५८ सालमा बिवाह भयो । अहिले १४ वर्षकी छोरी छन्
हेमोफिलियाका बिरामीहरुलाई “एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर” औषधि इन्जेक्सनबाट लगाउनुपर्छ । रगतमा १३ वटा कम्पोनेन्ट तत्व (फ्याक्टर) हुन्छन् । विशेष गरी रगतमा फ्याक्टर ८ (एट) र ९ (नाइन) डिफिसेन्सी भएको अवस्थालाई हिमोफिलिया भनिन्छ । तर कहिलेकाहीँ फ्याक्टर १० (टेन), ५ (फाइभ), ३ (थ्री), (२) डिफिसेन्सी भएका बिरामीहरु पनि फाट्टफुट्ट आउने गर्छन् । विकसित देशमा भएका औषधि कम्पनिहरुले फ्याक्टर ८ (एट) र ९ (नाइन) का लागि एन्टीहिमोफिलिक फ्याक्टर उत्पादन गरेका छन् । एक हजार आईयूको २० देखि ३२ हजार नेपाली रुपियाँसम्म पर्छ । आन्तरिक रक्तस्राव हुँदा हेमोफिलियाको एउटा व्यक्तिले एक पटकमा तीन–चार हजार आईयू लगाउनुपर्छ । उनीहरुका लागि कुन बेला कति भाइल औषधि चाहिन्छ ? भन्ने एकिन हुँदैन । कुनै दुर्घटनामा परेका हेमोफिलियाको एउटा व्यक्तिलाई करिब ३० हजार आईयूभन्दा बढी औषधि आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा उसले लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ । यो व्यक्तिगत रुपमा सम्भव हुँदैन ।
म्याद गुज्रिएका औषधि सेवा
केही विदेशी औषधि कम्पनिले प्रचारप्रसारका लागि केही उत्पादन वल्र्ड हेमोफिलिया फेडरेसनलाई दिने गर्छन् । फेडरेसनले नेपालजस्ता गरिब देशहरुलाई आकस्मिक अवस्थाका लागि यस्ता औषधि निःशुल्क पठाइदिन्छन् । औषधि बचाएर राख्नुपर्दा म्याद गुज्रिन्छ । अहिले बिरामीहरुले प्रयोग गरेका औषधि पनि सहयोगी संस्थाहरुले निःशुल्क पठाइदिएको औषधि हो । नेपालका हेमोफिलियाका कतिपय बिरामीले ब्लडबाट बनेको प्लाज्मा लगाउँछन् ।
राज्यको ध्यान खै?
राज्यको स्वास्थ्य सुविधा पाउने अधिकारबाट हामी बञ्चित छौं । हेमोफिलिया व्यक्तिलाई कम्प्रिहेन्सिभ होम डे केयरबाट आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका लागि राज्यले निश्चित अस्पताल तोक्नुपर्छ र आवश्यक औषधि खरिद गरेर उपलब्ध गराउनुपर्छ । अवस्थाअनुसार हप्तामा प्रतिव्यक्ति एक वा दुई भाइल औषधि प्राप्त हुन सकेमा हेमोफिलियाका बिरामीहरुले साधारण जीवन यापन गर्न सक्छन् । सोसाइटीको पहलमा वीर अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज र सिभिल अस्पतालबाट हेमोफेलियाका बिरामीले केही उपचार सेवा पाउँदै आएका छन् ।
आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइँदै, कसरी भयो योगको सुरुवात ?
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न उपयोगी मानिने योग गर्न
हेल्दी, स्फूर्त, चम्किलो अनुहारका लागि व्यूटी फूड
हेल्दी, स्फूर्त, चम्किलो अनुहारका लागि टमाटर, शखरखण्ड, बेरिज, सनफ्लावर सीड्स, ब्रोकाउली, पालंगो, गाजर, लो फ्याट
जनस्वास्थ्य सरोकार । हरेक ब्यक्तिमा हुने आफ्नै स्वभावका कारण ऊ अरुभन्दा फरक किसिमको हुन्छ ।